यस कारण 'नमस्ते' नै अभिवादन गर्ने उचित माध्यम हो ! हात मिलाउनुको साटो नमस्ते गरौँ - Himali Patrika
यस कारण ‘नमस्ते’ नै अभिवादन गर्ने उचित माध्यम हो ! हात मिलाउनुको साटो नमस्ते गरौँ
हिमाली पत्रिका २१ फाल्गुन २०७६, 8:43 am
चिनको उहान शहरबाट विश्वभर कोरोनाभाइरस फैलिएसंगै विभिन्न देशमा हात मिलाउन प्रतिबन्ध लगाईएको छ। फेस मास्कको प्रयोग गर्न र सकेसम्म हात नमिलाउन विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन्। अध्यन अनुसार कोरोनाभाइरस फैलनबाट रोक्न माक्स भन्दा ह्यान्ड ग्लाभ्स (हाते पन्जा)को भूमिकामहत्वपूर्ण रहने देखिएको छ।
हिन्दु धर्म तथा सस्कृतीमा हात जोडेर नमस्ते गर्ने र निहुरिएर साष्टाङ दण्डवत गर्ने परम्परा रहेको छ । तर, आजभोली मानिसहरु हात मिलाएर अभिभादन गर्दछन् र नमस्ते गर्ने प्रचलन कम हुँदै गएको छ । नमस्तेगर्नु भाइरसबाट बच्नु पनि हो।
तर, हिन्दु धर्म तथा सस्कृतिमा नमस्ते गर्ने प्रचलन त्यसै चलाइएको भने होइन, यसका विषेश कारण र फाइदाहरु छन्, त्यसै गरि हात मिलाउनुका पनि फाइदा वेफाइदा पनि रहेका छन् ।
नमस्ते गर्दा कसैलाई नछोइकनै अभिवादनको प्रक्रिया पुरा हुन्छ, यसबाट सरुवा रोगहरु सर्ने संभावना पनि कम हुन्छ, तर हात मिलाउँदा अन्य व्यक्तिसंग जोडिनु पर्ने हुन्छ ।
किन गर्ने नमस्ते ?
हिन्दु धर्मशास्त्रमा नमस्ते गर्नुका अन्य कारणहरु बताइएको छ, जस्तै नमस्तै गर्दा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुनुका सातै चैतन्य प्राप्त हुन्छ ।नमस्ते गर्दा स्वयं भगवान परमात्मा समेत खुसी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । नमस्ते गर्दा शरिरिमा आध्यात्मको समेत विकास हुन्छ ।
हता मिलाउँदा हाम्रो शरिरको उर्जा परिमण्डलमा अन्य व्यक्तिको उर्जाले घुसपैठ गर्ने मौका पाउँदछ । हात मिलाउँदा दुइ शरिरिका उर्जाहरु टकराउँछन् जसको असर शरिरमा मात्र होइन् मस्तिष्कमा समेत पर्दछ ।
हिन्दु धर्म र सस्कृतिमा स्त्रिसंग स्पर्श गर्ने पनि वर्जित गरिएको छ, यसको सिधा कारणपनि विदुतिय तरंग नखलबलियोस भनेर हो । त्यसैले अभिवादन गर्ने उचित माध्यम नमस्ते नै हो ।